बुटवलमा स्क्रब टाइफसले महामारीको रुप लिन सक्ने – Health Post Nepal
२०७५ असोज २० गते १५:२८
अकल्पनीय लक्षणसहित फैलिँदै छ स्क्रब टाइफस
चिसोसँगै डेंगु सुस्ताए पनि गलेन स्क्रब टाइफस, साउनयता ६३ जिल्लाका १२७१ मा संक्रमण
मुसामा पाइने एकप्रकारको परजीवीको टोकाइबाट लाग्ने स्क्रब टाइफस रोग ४२ जनामा देखिएको छ । बुटवलका चार अस्पतालमा शंकास्पद बिरामीको परीक्षण गर्दा ४२ जनामा रोग भेटिएको हो । यो संख्या अझ बढी हुन सक्ने देखिएको छ । स्क्रब टाइफस रोगले महामारीको रूप लिने हो कि भन्ने संकेत देखिँदासमेत त्यसको अध्ययन र व्यवस्थापनको तयारी हुन सकेको छैन ।
बुटवल क्षेत्रमा करिब १५ वटा अस्पताल रहेकामा चार अस्पतालको रेकर्डमा मात्र यति संख्या देखिएको हुँदा यो संख्या अझ बढी हुन सक्ने अनुमान छ । अस्पतालहरूबाट सूचना संकलन नहुँदा के–कतिलाई स्क्रब टाइफस रोग लागेको हो र कुन अवस्थामा छ भन्नेबारे अन्योल छ । जनताको स्वास्थ्यका लागि नेतृत्व गरिरहेको लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालले बजेट नभएपछि यसको कामकारबाही अगाडि बढाएको छैन । अस्पतालले यस क्षेत्रका अस्पतालहरूबाट सूचना संकलन गर्ने, अध्ययन गर्ने, विश्लेषण गर्ने र रोकथाम तथा सावधानीका उपायहरू अघि बढाउनुपर्ने हो, तर त्यस्तो गरिरहेको छैन । विनियोजित बजेट प्रदेश सरकारमै रहेको हुँदा काम हुन नसकेको लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालका मेडिकल रेकर्डर लक्ष्मीराज रेग्मी बताउँछन् । उनले रोगले साधारण अवस्थाको सीमा नाघेको हुँदा सतर्कता अपनाउनुपर्ने वेला आइसकेको बताए ।
प्रदेश ५ को सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डा. उमाशंकर चौधरीले बजेट वितरण प्रक्रियाका कारण बजेट निकासामा ढिलाइ भएको बताए । उनले उक्त महामारी नियन्त्रणअन्तर्गतका कालाजार, स्क्रब टाइफसलगायतको बजेट छिट्टै निकासा गर्ने जानकारी दिए । ‘प्रदेशको संरचना स्थापना र वितरण प्रक्रियामा केही ढिलाइ भएको हो,’ डा. चौधरीरले भने, ‘अब हप्तादिनभित्रमा निकासा हुन्छ ।’ लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालको रेकर्डमा चालू आर्थिक वर्षमा स्क्रब टाइफसबाट एकजनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा बुटवल उपमहानगरपालिका–११ की ६३ वर्षीया एक महिला छिन् । उनको १४ भदौमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो ।
स्क्रब टाइफस रोग लागेमा मुख्यतः ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, मुटुले राम्रोसँग काम नगर्ने, पेट दुख्नेजस्ता लक्षण देखिन्छन् । यो रोगको सावधानीका लागि झाडीमा काम गर्दा पूरा शरीर छोपिने कपडा लगाउने, झाडी सफा गर्ने, मुसाबाट बच्नुपर्ने उनको सुझाब छ ।
घाँस तथा झाडीमा जाँदा ‘माइट’ नामक उक्त परजीवीले मानिसलाई टोकेमा स्क्रब टाइफस रोगको संक्रमण हुने लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालका फिजिसियन डा. सुदर्शन थापाले बताए । डा. थापाका अनुसार स्क्रब टाइफस रोग लागेमा मुख्यतः ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, मुटुले राम्रोसँग काम नगर्ने, पेट दुख्नेजस्ता लक्षण देखिन्छन् । यो रोगको सावधानीका लागि झाडीमा काम गर्दा पूरा शरीर छोपिने कपडा लगाउने, झाडी सफा गर्ने, मुसाबाट बच्नुपर्ने उनको सुझाब छ । रोग लागेको शंका लागेमा चेकजाँचका लागि छिटो अस्पताल जानका लागि डा. थापाले सल्लाह दिए ।
अन्य रोगसँग मिल्ने केही लक्षणका कारण स्क्रब टाइफसबारे बिरामी र स्वास्थ्यकर्मीसमेत झुक्किने गरेका छन् । गत वर्ष स्क्रब टाइफसबाट ९१ जना प्रभावित भएकामा ४ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
नांगा खुट्टाले खेतबारीमा टेक्ने, झाडीमा सुत्ने गरेमा तथा घरवरपर मुसा भएमा स्क्रब टाइफसको संक्रमण अधिक हुन्छ । घरभित्र र वरपरको वातावरण सफा राखेर, झाडीमा नांगो गोडा या हातले नछोएमा यसको जोखिम कम गर्न सकिन्छ ।
खेतबारी वा झाडीमा मुसाको रगत चुसेर जिउने ‘माइट’ नामक परजीवीको माध्यमबाट मानिसमा स्क्रब टाइफस संक्रमण हुन्छ । झाडीमा बस्ने परजीवी (किर्ना) भित्र हुने ‘ओरेन्सिया सुसुगामोसी’ नामक जीवाणु शरीरभित्र प्रवेश गरेपछि यसको संक्रमण हुन्छ । यो परजीवी घाँस, झाडीमा बस्ने भएकाले घरभित्र मुसा पसेर किर्ना छोडेमा घरभित्रै पनि यो परजीवीले टोके स्क्रब टाइफसको संक्रमण हुन्छ ।
किर्नाले टोकेको ५ देखि ६ दिनमा व्यक्तिलाई ज्वरो आउने, शरीरमा रातो बिबिरा आउने, शरीर दुख्ने, ग्रन्थि सुन्निनेलगायत लक्षण देखिन्छन् । कतिपयको यो परजीवीले टोकेको भागमा कालो दाग देखिन्छ । कसैको भने दाग नदेखिन पनि सक्छ । समयमै उपचार नभएमा शरीरका विभिन्न अंगहरू मुटु, कलेजो, फोक्सो, मिर्गौलालगायतमा यसको संक्रमण फैलिएर मृत्युसमेत हुन सक्छ । यसको संक्रमणले कलेजो, मिर्गौलाजस्ता अंग फेल भएर बिरामीको ज्यान जान सक्छ ।
चिकित्सकका अनुसार नांगा खुट्टाले खेतबारीमा टेक्ने, झाडीमा सुत्ने गरेमा तथा घरवरपर मुसा भएमा स्क्रब टाइफसको संक्रमण अधिक हुन्छ । घरभित्र र वरपरको वातावरण सफा राखेर, झाडीमा नांगो गोडा या हातले नछोएमा यसको जोखिम कम गर्न सकिन्छ । घाँस भएको भुइँमा सीधै बस्ने या पल्टिने क्रममा यो परजीवी छालामा टाँसिने भएकाले त्यसो गर्नुहुँदैन । खेतबारीमा जाँदा लामो बाहुला भएका लुगा लगाउने, खुट्टामा बुटको प्रयोग तथा हातमा पन्जा प्रयोग गरेमा यसको जोखिमबाट बच्न सकिन्छ ।
– झाडी या बारीमा जथाभावी नबस्ने ।
– बारीमा जाँदा नांगो खुट्टाले नजाने ।
– घरवरिपरिको वातावरण सफा राख्ने ।
– चौर या झाडीमा सीधै नसुत्ने ।
– खेतबारीमा जाँदा पन्जाको प्रयोग गर्ने ।
Tags: स्क्रब टाइफस
One thought on “बुटवलमा स्क्रब टाइफसले महामारीको रुप लिन सक्ने”
Vayeka entomologist and microbiologist bidesh ma… Daksab haru clinic ma paisai को hodbaji ma.. Research vayena bhanera अस्पताल प्रसाशन लाई दोष..
के सही के गलत..